Air Con oယ်မယ်ဆို ရင် ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Air Con oယ်မယ်ဆို ရင်
1 Air Con တစ်လုံးရဲ့  အေးနိုင်စွမ်းကို Btu နဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ Btu များလာတဲ့အလျောက် သူ့ရဲ့  ဈေးနှုန်းကလဲ လိုက်ပြီး များလာမှာပါ။
အများစု သိထားကြတယ့် horsepower (hp) က တကယ်တမ်းတော့ အရေးမပါပါဘူး။ Horsepower(hp) ဘယ်နကောင်ရှိတဲ့ Air Con မှာ Btu ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာ Brand အလိုက် Model အလိုက် သတ်မှတ်ပုံ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
မိမိအခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu ကို အကြမ်းဖျင်းတွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မိမိ သုံးမယ့်အခန်းရဲ့ အလျားxအနံ square foot ကို 35 နဲ့ မြှောက်ပါ။ ရလာတဲ့အဖြေက မိမိ အခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ Btu ပါပဲ။
ဥပမာ 12 ပေx 15 ပေ အခန်းဆိုရင် square foot က 180 ပါ။ 180 x 35 = 6300 Btu လိုအပ်ပါတယ်။
အရိပ်ကျတဲ့အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu ကို 10% နှုတ်ပါ။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့ အခန်းမှာဆို ရလာတဲ့ Btu ကို 10% ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
မီးဖိုချောင်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် ရလာတဲ့ Btu ကို 4000 ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
အခန်းထဲမှာ လူ ၁ ယောက်ထပ် ပိုနေမယ်ဆိုရင် အခန်းဧရိယာအတွက် တွက်ထားတဲ့ Btu အပြင် လူတစ်ဦးအတွက်ကို 600 Btu စီ ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
2. Energy Efficiency Ratio(EER)
EER ဆိုတာ Btu per hour ကို input Watt(W) နဲ့ စားထားတဲ့ အချိုးပါ။
EER များတဲ့ Air Con တွေက ရေရှည်မှာ မီးအား ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါတယ်။
Air Con အများစုကတော့ EER 8.2 ကနေ 10.7 ကြားမှာ ရှိကြပါတယ်။
24 နာရီ7ရက်လုံး ဆက်တိုက် သုံးရမယ့်နေရာမျိုးမှာဆို EER မြင့်တဲ့ Air Con ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဆူညံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ split type မှာဆိုရင် အတွင်း unit နဲ့ အပြင် unit ရဲ့ ဆူညံမှုဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ အတွင်း unit ရဲ့ ပန်ကာက တော်တော်ဆူညံနေတယ်ဆိုရင် သင်ညအိပ်ရင် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေမှာပါ။ အပြင် unit ကလည်း ပြတင်းပေါက်နဲ့ နီးပြီး အသံကျယ်နေမယ်ဆိုရင် အတွင်းကပင် ဆူညံသံကို ကြားနေရနိုင်ပါတယ်။
4. Copper Pipe Quality
Air Con မှာ outdoor unit ထဲမှာရော Indoor unit ထဲမှာရော ၂ခုကို ဆက်ပေးထားတဲ့ ပိုက်မှာရော ကြေးနီကို အသုံးပြုရပါတယ်။ တကယ်လို့ သုံးထားတဲ့ ကြေးနီက မစစ်ရင်တော့ Compressor နဲ့ Condensor ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း full quality အအေးကို မရရှိနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့ Air Con တွေမှာ ကြေး (100%) အစား အလူမီနီယမ် (100%) သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် ကြေး နှစ်မျိုး ရောစပ်ပြီး သုံးထားပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းဝယ်စရိတ်မှာ ကြေးက ၂ဆ ပိုကုန်ကျပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြေးက အလူမီနီယမ်ထက် ပွတ်တိုက်စားနှုန်း ပိုခံနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အမြန်နှုန်းမှာလဲ ကြေးက ၂ဆ ပိုမြန်စွာ ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။
-ကြေးပိုက်ဈေးနှုန်းကလဲ ၁ ကောင် Air Con မှာ တစ်ပေ 1100 ကျပ် original ( ဖော့စွပ်မှာ ဆက်ရာကွဲရာမပါ) ရှိပါတယ်။ ၁.၅ကောင် Air Con မှာ တစ်ပေ 1500 ကျပ် original (ဖော့စွပ်မှာ ဆက်ရာကွဲရာမပါ) ပဲ ရှိပါတယ်။
5. ကြေးပိုက် ဖော့စွပ်
Outdoor နဲ့ Indoor unit ကို ဆက်ပေးတဲ့ ကြေးပိုက်ကို စွပ်တဲ့ ဖော့စွပ်က original စွပ်ပြီးသားမှ အအေးလုံမှာပါ။ ပိုက်သပ်သပ်ဝယ် ဖော့စွပ် သပ်သပ်ဝယ်ပြီး ဖော့စွပ်ကို ထက်ခြမ်းအလျားလိုက် အစဆုံး လှီးပြီးမှ ဖော့စွပ်ထဲ ကြေးပိုက် ထည့်တာက အအေးဓာတ် ကို လျော့ကျစေတဲ့အပြင် ပိုက်မှာလဲ ရေယိုစေပါတယ်။ အတွင်းမှာလဲ condensation အရည်တွေခဲသွားပြီး အအေးဓာတ် လျော့ကျစေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Air Con ဘယ်လောက်ကောင်းတာပဲ ၀ယ်ဝယ် ကြေးပိုက် စနစ်မှာ ချို့ ယွင်းနေရင်တော့ အလကားဖြစ်သွားမှာပါ။
.British Thermal Unit (Btu)
via U Ni Ni